Edirne နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်မီးရထား Related Feds ကုစားရမယ်လေ့ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး22 EdirneEdirne နှင့်အစ္စတန်ဘူလ်မီးရထား Related Feds ကုစားရမယ်လေ့
09 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 22 Edirne, 34 အစ္စတန်ဘူလ်, ခရီးဝေးရထားစနစ်များ, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, ခေါင်းစီးသတင်း, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ 0
ရထားလမ်းနှင့်ရထားနှင့်ဆက်စပ်သော Edirne အစ္စတန်ဘူလ်မှအခက်အခဲများတညျ့ရပါမည်
အချင်းချင်းဖွံ့ဖြိုးပြီးတိုင်းပြည်များတွင်တစ်ဦးချင်းစီဖြတ်သန်းနေ့ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး "အချင်းချင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများသောအားဖြင့်ငါတို့သည်ငါတို့၏နေဆဲရာအရပျ၌ဤကိစ်စတှငျထည့်သွင်းစဉ်းစားရထားနှင့်လေယာဉ်နှင့်အတူပြုနဲ့အတူလျော့ကျသောကြာကြာသတ်မှတ်ခြင်းရှိမရှိ Felicity ပါတီဗဟိုခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌ Saban Kaya, ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာပြည်တွင်းမြို့ကြီးများရှိမရှိ။ အစာရှောင်ခြင်းမီးရထားရလဒ်သိသာဘယ်လောက်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပတ်သက်သောသတင်းကောင်းပေးထားခဲ့သည်။ အနည်းဆုံးအရေးပေါ်အစီအမံသည်အထိလုပ်တည်ဆဲမီးရထားလိုင်းအမြန်နှုန်းကိုရထားယူရပါမည်များ၏အကျိုးရှိစွာအသုံးပြုရန်, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
07.30: အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် 11 Saban ရော့ခ်၏ပြဿနာဖြေရှင်းရာမှ Edirne-အစ္စတန်ဘူလ်ရထားန်ထမ်း, "ဒီလိုင်းပေါ်မှာ run နေသည့်ရထား, နံနက်နာရီ 30 အတွက်ဖျတ်လတ်သွက်လက်စေခြင်းမှရွေ့လျား Halkalı 18.00 အတွက်ညနေပိုင်းတွင်ဘူတာ, Halkalıသရုပ်ဆောင် မှစ. Edirne 22.00 ရေထဲမှာရောက်ရှိလာသည်။ ဆိုက်ရောက်မယ့် - ဒါကြောင့်တစ်နေ့တစ်ကြိမ်သွား။ ဒါဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာအနှစ်ပင် xnumx'lar ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်နိုင်ဘူး "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Saban ဤပြဿနာအပေါ်လူထုများ၏မျှော်လင့်ချက်များ Rock အောက်ပါလမ်းထဲမှာဖော်ပြနေသည်: "တောင်တက်နံပါတ်များကိုတိုးမြှင့်ရပါမည်။ လှည်းအရေအတွက်ကိုတိုးမြှင့်ထားရမည်, ထွက်ခွာခရီးသည်အရေအတွက်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမတ်တပ်ရပ်။ ထိုနေ့၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အညီမြန်နှုန်းရရှိသင့်ပါတယ်။ မီးရထားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုရထားနှောင့်နှေးကြုံနေရသည်အနည်းဆုံး 1 မှနာရီကိုမကြာခဏညီမျှသောအချိန်ကျမ်းပိုဒ်များကယူဆောင်ခဲ့သည်။ စောင့်ရှောက်မှုနှောင့်နှေးစေခြင်းငှါမဒါအဖြစ်စီစဉ်ထားရပါမည်။ ETUS မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးများကိုရထားများဆိုက်ရောက် - ထွက်ခွာနာရီအပေါ်အခြေခံပြီးအချိန်ကိုမသတ်မှတ်သင့်ပါတယ်။ အင်တာနက်နှင့်ကြိုတင်လက်မှတ်တွေရဖို့နိုင်တော့မည် (တစ်နေ့လျှင်လက်မှတ်လက်ရှိအလေ့အကျင့်ရှိနိုင်ပါသည်) "
နိုဝင်ဘာလ 25 နောက်တစ်နေ့နီးပါး Edirne အလေးပေး Saban ရော့ခ်၌ဝှက်ထားလျက်ရှိသောသောမြို့အားကစားကွင်းမှရပ်တန့်, "ဒီမှတ်တိုင် / ဆိုင်းဘုတ်ခဲ့ကြောင်းဖြစ်သောနိမိတ်လက္ခဏာကိုပင်ရှိသည်ပါဘူး! ဘူတာရုံပတ်လည်လယ်ကွင်းများနှင့်ပန်းကန်-shaped yasaktır-သတိပေးလည်သာအန္တရာယ်ရှိတဲ့ -TCDD ။ အဲဒါကို 'ဒီမှာ၏နိဒါန်း' 'ကဲ့သို့ပြောလျှင်အဖြစ်ပဲ! ကောင်းပြီ, ခရီးသည်ဘယ်မှာနှင့်မည်သို့ရထားပေါ်လိမ့်မည်နည်း လည်းဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်မှာစောင့်ဆိုင်းနေစဉ်ထိုင်ခြင်းနှင့်ရာသီဥတုမှကာကွယ်ရမည့်အဘယ်သူမျှမဖြစ်နိုင်ချေရှိပါလိမ့်မယ်။ ညဉ့်လုံခြုံရပ်တန့်မရှိဘယ်မှာ။ သူတို့ကမည်သည့်လုံခြုံရေး "ပုံစံလွန်ခဲ့သည်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။
"ရထားလမ်းအပေါင်းတို့နှင့်အရိုအသေအတွက်ကိုပိုချွေတာ, နှစ်ဦးစလုံးပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးပိုလုံခြုံ," Saban Kaya "ကျနော်တို့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးရှေ့တော်၌ထိုရထားလမ်းအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လတံ့သောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများရာ၌ခန့်ထားပြီဟုဆိုသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကဒီတစ်ခုကမှားစွဲစေအရာအားလုံးထဲမှာရှိသကဲ့သို့ပထမဦးဆုံးခလုတ်, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
UBR Related ထုတ်ဖော်အဆိုပါ UKOME ဆုံးဖြတ်ချက်ဖို့ယဉ်ထံမှလက်ခံရရှိ 06 / 06 / 2018 နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Mevlut ယဉ်; တက္ကစီမောင်းသူနှင့် ပတ်သက်. ခရီးသွားဧည့်မှသက်သာရာရစေရန်ခရီးသွားလုပ်ငန်း ukome အဲဒါကိုအသစ်တခုဆုံးဖြတ်ချက်ယူနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစာရွက်စာတမ်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်Mevlüt Uysal, Maltepe တှငျကငျြးပခဲ့လမ်းပေါ်မှာ Iftar အတွက်ကျောင်းအုပ်ကြီး, ဆရာ, ဆရာမကျောင်းကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်မိသားစုစည်းလုံးမှု၏အမျိုးသားရေးညွှန်ကြားရေးမှူး, ပညာရေးအသိုင်းအဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Mevlut ဿွာန်ရှေ့တော်၌ထိုသင်တန်းသားများကိုကိုင်တွယ်တဲ့သူ Uysal နှင့်တူရကီနိုင်ငံအစ္စတန်ဘူလ်, ကျနော်တို့နိုင်ငံမှာ "ပတ်ဝန်းကျင်ဿွာန်၏ကရုဏာတော်နှင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြုံနေရအစာရှောင်ကလူအများကြီးရဲ့အရသာနှင့်အစာရှောင်ခြင်းနှင့်အတူပါးစပ်ဖွင့်မရသူကပြောပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကခဏအကြာသင်၌ငြိမ်းချမ်းရေးကိုရှာဖွေဆုတောင်းကြပါစို့။ ကျနော်တို့ကိုငါတို့သိကြ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အစွမ်းထက်တူရကီရှိပါလျှင် ...
တူရကီပြဿနာများ၏ပေးသွင်းဥရောပ၌ရှငျခဲ့ Fixed ခံရဖြစ်ရမည် 25 / 05 / 2019 ပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦဝန်ကြီး Mehmet Cahit Turhan, မြို့ (ITF) တွင် Leipzig, ဂျာမနီအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပို့ဆောင်ရေးဖိုရမ်, အစည်းအဝေးတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့အကြောင်းပြချက်လည်းတဦးတည်းပြဿနာတွေတူရကီပို့ဆောင်ရေးခြင်းဖြင့်ကြုံတွေ့ကြောင်းအလေးပေးပြောဆိုခဲ့သည်။ တူရကီဥရောပအကြီးမားဆုံး Turhan အဆိုပါသင်္ဘောနှင့်အတူ "တချို့နိုင်ငံတွေ။ အဲဒီနိုင်ငံတွေမှာအကြားလုပ် Konan ကိုခွဲတမ်းနှင့်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာကုန်သွယ်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ drivers တွေကိုခွဲတမ်းနဲ့ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာချပြီး, အစားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစရိတ်တိုးမြှင့်နေကြသည်အခြားအလုပ်အကိုင်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးဖော်ပြနေသည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဒီကုန်ကျစရိတ်ပစ္စည်းများ အသုံးပြု. နိုင်ငံသားများဖြစ်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်ယှဉ်ပြိုင်မှု၏င့်လင်းမြင်သာပေးဆောင်နေကြတယ်, အစဉ်မပြတ်ငါလူတိုင်းကမှန်ကြောင်းဆိုလိုတာ။ ကျနော်တို့လွတ်လပ်၏ဘက်မှာဖြစ်ကြောင်းအလေးအနက်ဖော်ပြပေမယ့်စီးပွားရေးနှင့်နိုင်ငံရေးအတွက်ပါးလွှာသည့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များသို့ဝငျ ...
စီးတီး Stop သွားရောက်ကြည့်ရှု
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: စက်တင်ဘာလ91855 အော်တိုမန်အင်ပါယာ Edirne-အစ္စတန်ဘူလ်-Varna
တူရကီပြဿနာများ၏ပေးသွင်းဥရောပ၌ရှငျခဲ့ Fixed ခံရဖြစ်ရမည်
တူရကီအတွက်ရထားစနစ်နှင့်အတူ Related Links များ
BeylikdüzüAvcılar Metrobus ဘူတာနှင့်အဓိက၏ရှားပါးမှု
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အခက်အခဲများ Bitliste တင်သွင်း
Marmaray 's ဒုက္ခ Maltepe အတွက်တင်သွင်းစေသော